Ku rakib Donut-ka Htc Magic | Androidsis
KU DIIJI DONUT ON SIXIRKA HTC
antocara | | HTC, ROM, Tababarada, Noocyada Android
Shalay waxaan ka wada hadalnay sida aan wax u rakibo Android 1.6 ama Donut on Htc G1 ah, maanta waa markiisii Sixirka Htc. Wixii ku rakib Donut on the Htc Magic waxaan leenahay laba fursadood: mid waa in la rakibo Romt rasmi ah inuu ku daabacay boggiisa internetka qalabka Sixirka Htc in Google ay bixisay Io ugu dambeysay 2009; tan kale waa in la rakibo rooti casriyeysan oo kor ku xusan. Labada ikhtiyaar waa wanaagsan yihiin, tan hore waa in lagu sameeyaa amarrada adb sidaa darteedna, marka lagu daro rakibidda roomaanta, waxaad ku tababbaraneysaa amarradan waxaadna baranaysaa wax kale kan labaadna waxaa lagu rakibay dib u soo kabashada boosteejada.
Laga soo bilaabo androidsis Annaga mas'uul kama nihin waxyeelada suurtagalka ah ee laga yaabo inay ku timaado garoonka, in kasta oo aysan jirin wax dhaca
Labada dariiqoba waa inaad yeelataa helitaanka xididka ee xarunta oo waxay leeyihiin Raadiyaha Version 2.22.19.26I rakibay.
Buugga qaabkan waxaa sameeyay qof ay wada shaqeeyaan oo ka socda webka, @ josan1990, oo shalay qatar galiyay ku rakibida Htc Magic-kiisa.
Faylasha lagama maarmaanka u ah inaad kala soo degto kumbuyuutarka:
SDK Andorid 1.6 waxay sii deynaysaa inaan ka soo dejisanno:
0. Macluumaadka rakibida kahor
ku. Annagu mas'uul kama nihin waxa ku dhici kara sixirkaaga, annagoo leh ma aanan qabin wax dhibaato ah.
b. Wax kastoo mobilka ku jira laakiin aan ku jirin kaarka xusuusta ayaa lumaya, mobilada waxaan ula jeedaa dejinta, sms, mms, email, barnaamijyo, iwm
c. Waxaan kugula talinayaa batteriga in ka badan 80% lacag. Haddii ay damiso inta hawshu socoto, waxaa laga yaabaa in laga dhigo wax aan faa'iido lahayn.
1. Diyaarinta maaddada
ku. Ka soo saar feylka la cadaadiyey ee ka kooban Andorid SDK (oo loo yaqaan 'android-sdk-windows-1.6_r1') xididka wadista weyn ee adag (C: / caadi ahaan) oo dib ugulaab magaca HTC iyo markaad furto, 5 fayl (kudar, docs, platform, qalab, usb_drivers) iyo 2 faylal (documentation.html iyo RELEASE_NOTES.HTML) waa inay muuqdaan.
b. Gudaha Magic Waxaan aadeynaa Menu-ka - Dejinta - Codsiyada - Horumarinta - Ka-kabashada USB-ga oo aan dhaqaajino.
c. Waxaan isku xireynaa Magic kombuyuutarka iyo qalabka cusub ee la helay ayaa soo muuqan doona, waxaan u siineynaa inay darawallada gacanta ku raadsadaan markay weydiisato galka meesha laga raadsanayo waa inaan tagnaa C: / htc / usb_driver oo aan wadayaasha ka qaadnaa halkaas.
d. Markii aan rakibno, waxaan ka saareynaa fiilada USB-ga, dami mobilka oo waxaan ku dareynaa furaha soo celinta oo la riixay androids-yada qaarna waxay ka muuqan doonaan mooto, waxaan isku xireynaa USB-ka oo haddii ay darawaladu mar labaad weydiistaan, samee isla talaabada hore , mobiilku wuxuu ku dhaafayaa isku xirnaanshaha shaashadaas, hada waxaan aadeynaa kumbuyuutarka.
ku. Feeji saxiixa-google_ion-img-14721.zip oo qaado boot.img, system.img iyo faylasha userdata.img una guur C: / htc / tools / folder
b. Waxaan fureynaa «CMD» ama «Amarka Degdega ah» (bilow-barnaamijyada-qalabka) waxaan qornaa amarka «cd ..» illaa aan ka aragno oo keliya C: />, hadda waxaan qorey «cd htc» ka dibna «qalabka cd», hal mar halkan waxaan ku qoreynaa «fastboot flash boot boot.img» waxaanan ku arki doonaa sixirka dhanka midig ee sare in baarar la buuxiyay, markii baarka laga saaray iyo markale qunsulka taliska waxaan marinay wadada aan ku qori karno dhig «fastboot flash system system.img" isla waxkastana sidii hore oo kale ayey u dhacayaan markay dhammeeyaanna waxaan qoreynaa "fastboot flash userdata userdata.img" oo markay ku dhammaato "fastboot reboot" terminal-ka ayaa dib loo bilaabayaa, USB-ga waan ka furi karnaa.
aniga. Soo koobista amarka sida ay isugu xigaan:
1. Waxaan ku jirnaa C: / (waxaan ku gaarnay «cd ..»)
2. Cd htc
3. Qalabka Cd
4. Fastboot flash boot boot.img
5. Nidaamka Flash flash system system.img
6. Fastboot flash userdata userdata.img
7. Fastboot reboot
3. Rakibaadda Boostada.
ku. Marka kor ku xusan la dhammeeyo, boosteejada ayaa si caadi ah dib u bilaabi doonta, Vodafone, astaan Android iyo ugu dambayn, saaxir qaabeynta Google.
b. Waxaan leenahay Andorid 1.6 Donut rakibay (miyaanay dhib ahayn?)
c. Kumana timaaddo APNs, sidaa darteed kuma xirmi doonto internetka, waa inaad gacanta ku gelisaa xogta. (Waxay ku dhow yihiin dhammaantood golaha)
d. Hadda waa inaan helnaa marin xidid, tan ayaan uga baxeynaa tan faylka geli oo ku rid galka qalabka ee sdk-ka android. Kadib isla galkaas ku yaal terminaalka waxaan sameynaa waxyaabaha soo socda:
qolof adb 'gala'
Mount -o rw, remount -t yaffs2 / dev / block / mtdblock3 / system 'gala'
Mar labaad ayaad fureysaa terminal-ka waxaanan aadeynaa aaladaha sdk, waxaan kuqornaa:
adb riix Superuser.apk / system / app 'gala'
Waxaan horey u helnay marin xidid
4. Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (FAQ).
ku. Waxay bixisaa qalad sheegaya in amarku uusan ansax ahayn ama uusan sameyn karin, soo dejiso oo rakibi (iyada oo loo marayo dib u habeyn wax ku ool ah) tan: oo sii wad hawsha markale.
b. Fastboot flash boot boot.img ayaa leh: INFOs saxeexa saxeexa… saxeexa xaqiiji inuu fashilmay. Mar labaad soo dejiso feylka, maadaama laga yaabo inuu kharribmay.
GRACIAS @ josan1990
Waan soo dejineynaa tan faylka, waxaan kuqornaa kaarka SD ee loogu magacdaray update.zip oo dami Htc Magic. Waxaan ku shideynaa taleefanka qaab soo kabasho, (Guriga + daar) oo hadda waa waqtigii la samayn lahaa keyd haddiiba duqsigu dhaco. Marka gurmad la sameeyo, waa inaan sameynaa Wipe adoo ka dooranaya liiska soo kabashada oo markaan dhammeyno ayaan doorannaa Apply update. Markaan dhammeyno waxaan Donut ku yeelan doonnaa Htc Magic.
Dhammaan su'aalaha iyo faallooyinka waxaa lagu xallin doonaa golaha
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » KU DIIJI DONUT ON SIXIRKA HTC
Waxaan rajaynayaa in buugaygu ku caawin doono oo si fiican buu ii sharraxay, waa markii iigu horreysay ee aan sameeyo oo aan ku baahiyo mareegaha, dhaleeceynta waa la aqbalaa 😉 Thanks to androidsis oo daabacday.
Waad ku mahadsantahay qoritaanka. salaan
Qaabka labaad, ma waxaad u baahnaan laheyd inaad APN qaabeyso?
Iyo wax kale, kani maahan cusbooneysiinta rasmiga ah, waa sidaas?
Ku jawaab Phobos
Ma ahan cusbooneysiinta rasmiga ah. Qaabka labaad anigu kuuma xaqiijin karo, laakiin si kasta oo taasi tahay mid aad u fudud, xogta dhammaan apn-ka waxay ku jiraan golaha. Dhamaan wanaag
Waad salaaman tahay, su'aal baan qabaa. Qeybta aad ku xidideysid: amaradaasi ma garanayaan nidaamka ay noqon doonaan, waxaan ku sameynayaa mac, markii aan dhigona waxay weydiisataa erayga sirta ah, kaas oo aan ku galo lambarka sirta kumbuyuutarkayga, waxayna ii sheegtaa inuu khaldan yahay, waxaan u malaynayaa inuu noqon doono furaha gala nidaamka faylka ee android ... ma garanaysaa waxay tahay?
Waad ku mahadsan tihiin
amarada waxaa loogu talagalay daaqadaha iyo mac labadaba, waxaa laga sameeyaa terminal-ka mar gudaha galka qalabka gudaha SDK-ga android.
Soo dejiso, kala fur oo nuqul "su" iyo "Superuser.apk" ee c: htctools
1. Ku bilow terminalka soo kabashada (guriga +)
3.maamuus / nidaam
5.adb riix su / system / bin / su
6.adb shell chmod 4755 / system / bin / su
7.adb riix Superuser.apk /system/app/Superuser.apk
8.adb reboot reboot
Diyaar ma nihin xidid
Ku jawaab freeshark
por Gracias el aporte
Waxaan ku rakibay dono sida ku cad hagaha habka ugu horeeya wax walbana waa qumman yihiin, laakiin xidid kuma noqon karo:
* adb shell 'gala'
* su 'geli'
* Mount -o rw, remount -t yaffs2 / dev / block / mtdblock3 / system 'gala'
* xir xiritaanka
* Mar labaad ayaad fureysaa terminal oo waxaan aadeynaa aaladaha sdk, waxaan kuqornaa:
* adb riix Superuser.apk / system / app 'gala'
Markaad isku dayeyso inaad maamusho "su" medice ma haysto rukhsad.
Kama soo dejisan karo saxiixa-google_ion-ota-14721.zip.
Qof kale ma dhacay?
xagee ka heli karnaa faylkaas?
Waxaan galayaa bogga dhib la'aan
My sixir HTC dhintay markii aan aqbalay rakibaadda otomaatiga ah ee 1.6. Halkaas uun ka fur shaashadda 'vodafone' oo halkaas ayey ku xannibtaa weligeedba.
Waxaan horey u sameeyay dib u habeyn moobilka ah oo aan ikhtiyaar kuugu siinayo barnaamijkeeda soo kabashada, laakiin si isku mid ah aniga iguma shaqeyso. Waxay i siinaysaa qaladka E: ma furi karo / kayd / fayl soo kabasho.
Waan soo dejiyey feylka si aan ugu rakibo micro sdkayga (update.zip) laakiin sidee baan u dhigaa halkaa madaama moobilku ii oggolaanaynin inaan wax uun ka adeegsado USB-ga? Waa waxa kaliya ee igu soo dhacay inaan hagaajiyo moobilkeyga.
Waxaan ka fiirsanayaa ismiidaamin.
Ku jawaab Yanblako
Cusboonaysiinta deeq-bixiyeyaashu way kuu timid markii aad oggolaatayna, ma bilaabanayso? Miyaad hore u bedeshay romka? Hadday sidaas tahay, midkee ayaad lahayd?
Waxaan u siiyay inuu aqbalo mana aqaano romanka aan horey ulahaa maxaa yeelay waxaan iibsaday taleefankan waxbana ma aqaano ... ama micnaha romka macnihiisu. Hadday tahay nidaamka qalliinka ee hore, waxaan u maleynayaa inuu ahaa 1.5, in kasta oo markaan ku xiro USB-ga aan u maleynayo inuu soo baxayo 1.0.
Ma aqaan wax aan sameeyo. Waxa ugu xun ayaa ah in aanan marin taleefankayga oo ah usb, markaa ma haysto fursado badan oo sidaas ah.
Dami oo daar, fure fure guriga si wadajir ah ula furaha korontada. Ii sheeg waxa soo baxa
Waxaan helaa soo kabashada nidaamka Android (2e)
Iyo afar ikhtiyaar. Dhamaadka kuwan, hoosta, waxaan yeelayaa jaalle: E: Ma furi karo / kayd / soo kabasho / amar
Waxaad heleysaa mid oranaya update.zip
Haa, dabcan, laakiin sidee ayaan ugu dhejiyaa cusboonaysiinta taleefanka taleefankayga? Taasi waa dhibaatadeyda. Waxaan ka soo degsaday kumbuyuutarkeyga waxaanan sugayay qof ii sheega sida loo helo kaarkayga micro sd markii uu barafoobo.
Hagaag, sd ka qaad taleefanka kuna xir kumbuyuutarka.
Waxaan kuugu mahadcelinayaa antocara caawimaaddaada, laakiin ma haysto sida aan ugu xiro kombuyuutarka maxaa yeelay ma haysto wax la qabadsiiya oo aan ku sameeyo. Marka waxaan rabaa inaan sameeyo usb.
Hal su'aal oo dheeri ah? Antocara ... Waxaan u soo iibsanayaa adabtarad my micro sd, laakiin waxaan doonayay inaan ogaado haddii romkeeygu duug yahay, ma jiraan wax dhibaato ah oo ku saabsan cusbooneysiinta donut-ka dusheeda?
Soo iibso adabtarada micro SD. Nuqul feylka update.zip (si fiican u qoran) kaarka. Waxaan raacay talaabooyinka si aan ugu rakibo adoo isticmaalaya soo kabashada HTC. Codsiga gelinta ayaa i siisay natiijadan:
E: Saxeex ma jiro (faylasha 497)
E: Xaqiijintii way fashilantay
Rakibkii waa la joojiyay
Ma jirtaa waddo lagu hagaajiyo qaladkan. Ma lihi fursado ii hadhay.
1.- Waan ka degnaa
2. - Waxaan damineynaa taleefanka oo waxaan ku shideynaa habka loo yaqaan 'fastboot'
3. - Faylka aan soo degsanay kahor soo kabashada-RAv1.1G.img waxaan kuqornaa android / qalabka /
4.- Waxaan u soconaa kumbuyuutarka si aan u bilowno 'RUN'. Waxaan qornaa cmd wuxuuna furi doonaa shaashad terminal madow ah. Waxaan qornaa cd .. illaa aan ka aragno shaashadda c:> ka dib waxaan ku qornaa waxyaabaha soo socda:
cd android (oo riix gala)
qalabka cd (oo riix gala)
soo kabashada degdegga ah ee soo kabashada flash-RAv1.1G.img
Isla waxbaa igu dhacay aniga oo ah Yanblako
wali, waan soodajiyay feylka img laakiin garan maayo talaabada 3aad sida loo dhigo galka qalabka
Ku jawaab lumi
KU rakib ANDROID 1.6 RASMI RASMI AH OO KU JIRA HTC G1 OO AAN ROOT AH
SIDEE LOOGU RABAA INA ANDROID 1.6 AMA LOOGUGU DEJIYO HTC G1